Xuquuqda Xubinta iyo Asturnaanta - Caymiska Caafimaadka Deegaanka ee Gobolka Washington - CHPW
Bogga ugu weyn > Xarunta Xubinta > Xuquuqda Xubinta iyo Asturnaanta
Waxaan ilaalinaa macluumaadkaaga caafimaadka, waxaadna xaq u leedahay inaad ogaato sida ay tahay.
Xuquuqdaada iyo Macluumaadkaaga Caafimaadka
Medicaid-keena Ogeysiiska Dhaqanka Asturnaanta wuxuu kuu sheegayaa sida aan u isticmaalno una wadaagno macluumaadkaaga caafimaad. Waxa kale oo ku jira xuquuqdaada asturnaanta caafimaadka. Waxaan kuu soo jeedinaynaa inaad dib u eegto kanaga Xuquuqda Xubinta iyo Waajibaadka, kaas oo kaa caawinaya inaad hubiso inaad hesho daryeelka ugu fiican.
Macluumaadka Caafimaadka ee la ilaaliyo
Macluumaadka Caafimaadka ee la Badbaadiyay (PHI) macnaheedu waa macluumaadka caafimaadka oo ay ku jiraan magacaaga, lambarkaaga xubin, ama macluumaad kale oo lagu garto. PHI waxaa ilaaliya sharciga federaalka.
Waxaad xaq sharci u leedahay inaad:
Na weyddiiso helitaanka PHI-gaaga
Na weydiiso inaan saxno PHI-gaaga
Weydiiso liiska dadka qaarkood iyo waqtiyada aan wadaagnay PHI-gaaga
Weydiiso xaddidaadyo gaar ah oo ku saabsan sida aan ula wadaagno PHI-gaaga
Na weyddiiso inaan beddelno macluumaadkaaga xiriirka
Si aad codsi u sameyso, buuxi foomka ku habboon una dir:
Attn: VP, Sarkaalka U hoggaansanaanta
Waxaad xaq u leedahay inaad codsato qaab kale oo isgaarsiineed (tusaale ahaan, boostada caadiga ah, emaylka, taleefanka, fakiska) ee Macluumaadkaaga Caafimaadka ee la ilaaliyo ama isgaarsiinta PHI-gaaga oo lagu geeyo meel kale. Waxaad ku sameyn kartaa hadal ahaan adoo wacaya Adeegga Macaamiisha ama qoraal ahaan ugu soo dira fakis (206) 521-8834 ama emayl u dir [emailka waa la ilaaliyay]. Waxaad adeegsan kartaa foomka Codsiga ee Wadahadalka Qarsoodiga ah ee CHPW ama foomka Xafiiska Gobolka Washington ee Caymiska Caymiska oo ku yaal https://www.insurance.wa.gov/media/9698.
Foomamka Xubnaha Apple Health (Medicaid)
Oggolaanshaha Siidaynta Macluumaadka Caafimaadka ee La Ilaaliyo | Español
Ruqsad siideynta Macluumaadka Sirta Isticmaalka Daweynta Qalalaasaha
Codsiga Helitaanka Macluumaadkaaga Caafimaadka ee Badbaadsan
Codsi in la saxo Macluumaadkaaga Caafimaadka ee Badbaadsan
Codsiga Xisaabinta Shaacinta Macluumaadkaaga Caafimaadka ee Ilaalinta
Codsiga Xaddidaadda Bixinta Macluumaadkaaga Caafimaadka ee Difaaca
Codsiga Xiriirka Qarsoodiga ah
Adeegsiga, shaacinta, iyo amniga macluumaadka caafimaadka la ilaaliyo
CHPW waxaa ka go'an inay ilaaliso macluumaadkaaga caafimaadka.
Waxaan u adeegsanaa tikniyoolajiyad si aan u ilaalino macluumaadkaaga caafimaad ee dhowrsan
Waxaan macluumaadka caafimaadka ugu dirnaa emayl qaab aan la aqrin karin haddii qof kale arko emailka.
Xafiiskayagu jidh ahaan waa amni.
Waxaan ku xakameyneynaa gelitaanka xafiiskayaga nidaamyo galitaan amni oo dhammaan dadka soo gala xaruntayada waa inay xirtaan aqoonsiga
Waxaan ku xafideynaa macluumaadka caafimaadka oo qoran khaanad markii aan la isticmaalin.
Waxaan ilaalineynaa kumbuyuutarradeena marwalba.
Waxaan barnaa shaqaalaheena sida loo ilaaliyo macluumaadkaaga.
CHPW waxay tababartaa shaqaalaha si loo ilaaliyo asturnaanta iyo amniga macluumaadka caafimaadka la ilaaliyo.
Waxaan xadideynaa kuwa arki kara macluumaadka caafimaadka la ilaaliyo. Kaliya shaqaalaha u baahan inay ogaadaan macluumaadka caafimaadka la ilaalin karo ayaa isticmaali kara.
Waxaan xadideynaa waxa aan kaga wadahadleyno taleefanka.
Haddii macluumaadkaaga caafimaad waligood lala wadaago qof aan u baahnayn inuu arko, ama aan looga baahnayn inuu ku ilaaliyo sharciga, waxaan qaadnaa tallaabooyin aan ku saxeyno qaladka annaga iyo adiga iyo hay'adaha dowladda ee ku habboon.
Weydii Su'aal ama Ka Warbixi Dhibaato
Haddii aad qabtid su'aalo ku saabsan asturnaanta iyo amniga PHI-gaaga, fadlan nala soo xiriir.
Xubnaha Apple Health: Call 1-800-440-1561 (TTY Relay: Garaac 711), Isniinta - Jimcaha, 8 subaxnimo - 5 galabnimo, ama email noogu soo dir [emailka waa la ilaaliyay].
Haddii aad rumeysan tahay in lagu xad gudbay xuquuqdaada gaarka ah, waxaad cabasho noogu soo diri kartaa taleefan ama boosto. Kumana ciqaabi doono sinaba haddii aad gudbiso cabasho.
Joojinta khayaanada, qashinka, iyo xadgudubka
Been-abuur waxay dhacdaa markii qof isagoo og u soo gudbiyo sheegasho been ah oo keenta lacag-bixinno aan habboonayn. Khayaanada ayaa lacag ka qaata barnaamijyada daryeelka caafimaadka waxayna ka dhigeysaa mid aad u adag in lagu bixiyo daryeelka dhabta ah ee loo baahan yahay. Waxay kuxirantahay qiimaha guud ee sare ee daryeelka caafimaadka.
qashinka si xad dhaaf ah loogu isticmaalo adeegyada ama dhaqamada kale ee, si toos ah ama si aan toos ahayn, u keenaya kharashyo caafimaad oo aan loo baahnayn. Guud ahaan looma tixgeliyo inay tahay dambi, laakiin waa ku takrifal kheyraad.
Xadgudubka waa ficil keeni kara kharash caafimaad oo aan loo baahnayn. Waa marka qof ama hay'ad ay been ka sheegaan xaqiiqooyinka si loo helo lacag bixin, laakiin aan ogaan iyo / ama ula kac loo samayn.
Waxbadan ka baro khayaanada, qashinka, iyo xadgudubka
➔ Ka warbixi khayaanada
An dardaaranka hore xulashooyinkaaga daryeelka caafimaadka u qoraya una sheegaya dhakhtarkaaga iyo qoyskaaga nooca daryeelka aad samayso ama aadan rabin. Inaad haysato dardaaran hore waxay ka dhigan tahay kuwa aad jeceshahay ama dhakhtarkaagu kuu samayn karo xulasho caafimaad adiga oo ku salaynaya waxaad rabto.
➔ Baro sida loo sameeyo dardaaran hore ee doorbidyadaada daryeelka caafimaad.
Cabashada iyo rafcaanka
Waxaan u tixgelinaynaa welwelkaaga si dhab ah. Waad xareysan kartaa a cabashada qorshahaaga daryeelka caafimaadka haddii aadan ku faraxsanayn sida laguula dhaqmay, tayada daryeelka ama adeegyada aad heshay, aad dhibaato ku qabtid helitaanka daryeel, daaweyn ama daawo aad u baahan tahay ayaa loo diiday, ama waxaad qabtaa arrimo biilal ah.
➔ Baro sida loo gudbiyo cabasho (cabasho) ama rafcaan.
Taariikhda Ugu Dambeysa ee Cusboonaysiinta: Oktoobar 6, 2021